Golaha Wasiirada oo soo dhoweeyey heshiiskii Dawladda Soomaaliya iyo Somaliland – SBC
Golaha Wasiirada oo soo dhoweeyey heshiiskii Dawladda Soomaaliya iyo Somaliland
Posted by Webmaster on July 18, 2013 Comments
Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii joogtada ahaa, waxaana shir gudoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”, iyadoo looga dooday qodobo dhowr ah.
Golaha Wasiiradu ayaa ka dooday heshiiskii 10-kii bishan July ku dhex maray dawladda Soomaaliyeed iyo Somaliland magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxayna dood dheer iyo falan qeyn kadib si buuxda u soo dhaweeyeen heshiiskaasi dhex maray Dawladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland.
“Heshiiskani waa talaabo loo qaaday dhanka dib u Heshiisiinta iyo Midnimada” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon oo shir guddoominayay shirka golaha Wasiirada.
Heshiiskan ayaa lagu taageerayay heshiiskii bishii May ay dawladda Soomaaliyeed kula soo wareegtay maamulka Hawada dalka. Iyo qaabkii farsamo ee loo maareyn lahaa maamulka duulimaadyada hawada dalka.
Afhayeenka Xukuumada Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbaahinta u sheegay in sidoo kale kulanka diirada lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin ammaanka dalka, wuxuuna tilmaamay in laga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga, iyo sidii loo fududeyn lahaa mushaaaraadka ciidamada dawladda qalabka sida, si kor loogu sii qaado sugida amniga.
Sidoo kale, Afhayeenka Xukuumada ayaa sheegay in golaha Wasiiradu ay magacaabeen Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, waxaana loo magacaabay Jeneral Xuseen Xasan Cismaan, oo horay u ahaa taliye kuxigeenka Ciidanka Asluubta, waxaana soo jeedinta lahaa Wasiirka Wasaaradda Garsoorka iyo Cadaalada Mudane Cabdullaahi Ebyan Nuur.
Press officer, PM office